Meksika: Fanambarana ny heloka nataon’ny pretra Maciel · Global Voices teny Malagasy
Meksika: Fanambarana ny heloka nataon'ny pretra Maciel
Voadika ny 21 Mey 2010 8:42 GMT
Niteraka resabe ny fanadihadihana natao vao haingana mikasika ny heloka nataon'nyMompera Marcial Maciel, mpanorina ny fikambanana Legion du Christ, izay niharan'ny fanamelohana marobe momba ny fametavetana ankizy tsy ampy taona nanomboka tamin'ny taona 1990 hatramin'ny taona 2008 nahafatesany. Ankoatry ny vonoan'olona, dia fantatra fa teo ambany fiarovan'ny mpitondra fivavahana ambony manakaiky ny Papa Joany Paoly II sy mpandraharaha ambony sy mpanao politika meksikana ity pretra ity araka ny voalazan'ny lahatsoratra maro tao amin'ny gazety The New York Times.
Sary midiman. Nahazoana alalana tamin'ny Creative Commons License. Nalaina tao amin'ny http://www.flickr.com/photos/midiman/90232391/
na dia efa maty tamin'ny taona 2008 aza i Maciel, dia tsy mijanona mitady vaovao mikasika ny heloka nataony sy ny fitsarana izany ireo niharam-boina. Na tsy misy fiarovan'ny Papa Joany Paoly II aza, dia nomena ny fanampim-baovao amin'ny antsipiriany momba ireo heloka vitany ary voajery manontolo ny halehibeazan'ny fahavoazana vokatry ny nataon'ity pretra ity. Tamin'ny volana martsa 2010, zanaka lahy 2 milaza ho zanaky Maciel no nilaza tamin'ny mpanao gazety [es] ny fomba ratsy nitondrana azy ireo nandritra ny fahazazany nataon'ny rainy azy nandritra ny 8 taona, miaraka amin'ny antsipiriany mazava tsara.
Raha vao nahoraka ny vaovao, dia nisy nilaza koa fa manan-janaka vavy i Maciel ary voapanga in-9 ho nametaveta ireo mpianatra tao amin'ny semineran'ny Legion. Tamin'ny martsa, ny mpisolo vavan'ny zanaky Maciel no nanambara [es] fa ity pretra meksikana ity dia nanana pasipaoro, vola tany amin'ny banky, ary karatra fakana vola tamin'ny anarana 3 samy hafa, ary nampiasainy koa ny volan'ny Legion amanalavitrisany[es] “nividianany” ny mpitondra ambony tao Vatican sy ny namany. Manamafy ny fanadihadihana tamin'ny taon-dasa izany fa ity pretra ity dia mifandray amin'ny vondrona mpivarotra sy mpanondrana zava-mahadomelina [es] na dia izy aza no nandika ny boky voalohan'ny Legion[es] El salterio de mis días (Ny boky salamon'ny androko).
Vao tamin'ny volana martsa 2010 no navoakan'i Vatican ofisialy ny “fiainana 2″ niainan'i Maciel ary nomelohiny ho “maty eritreritra”.
Noresahana tao amin'ny haino aman-jery ny zava-doza vitan'ity pretra ity tato anatin'ny taona vitsivitsy izao. Ao amin'ny bilaogy Atrio dia misy ady hevitra noforonina nanomboka ny taona 2006, taona nanamelohan'ny Papa Benoit 16 an'i maciel ho nametaveta ankizy. maneho ny heviny ao amin'ny bilaogy i Emilio mikasika ny antoka ho an'ireo ankizy ao amin'ny seminera:
Mahatsiaro ireo izay niaraka tamin'ny Legion rehetra aho. Marina ny antsika ary tiantsika ny hahazo antoka avy amin'ny fiangonana fa raha alefa any amin'ny seminera ny zanantsika lahy na ny anadahintsika… dia tsy ho vetavetain'ny mpanolana. Raha tsy misy vokany ny fanadihadihana dia ho voakasik'izao raharaha izao ny Legion sy ny fiangonana miaraka. iza intsony no te ho pretra?
Ao amin'ny soratra vao haingana, ilay mpitoraka bilaogy immorfo no manamarika ny valinteny tsy mahafapo nataon'ny fikambanan'ny relijiozy mikasika ireoniharean-doza tamin'ny fametavetana:
Raha mba afaka mieritreritra ny hanafoanana io fikambanana io mantsy isika, miaraka amin'ny porofo, manamafy ny nisian'ny fametavetana izay tanteraka noho ny fanararaotam-pahefana nataon'ireo mpitarika, miaraka amin'ny honitra haloa ho an'ireo niharan-doza, izay vao afaka milaza isika misy marina ny fitsarana fa tsy mionona amin'izao zava-bita izao fotsiny.
Ao amin'io soratra io ihany, ilay mpampiasa twitter Jose Pablo (@pouch15) miteny ratsy manankiana ny teny nofidiana natokana ho an'ireo mpitarika relijiozy izay tsy nosokajiana ho mpanao ratsy:
Tiako raha biby ny mpanolana, tsy misy fotony, fa i Maciel sy ny pretra mpametaveta ankizy antsoina fotsiny hoe mpanota.
Ilay mpitoraka bilaogy katolika Fray Nelson manoratra milaza ny fivoaran'ny zava-doza nataon'i Maciel arakaraky ny fandrosoan'ny fotoanae [es] ary tafiditra ao anatin'izany koa ny tsiambaratelon'ny manampahefana sy ny jamba manaraka azy rehetra:
Mazava ho azy, tsy papa no manana fahefana ambony indrindra, mitovy amin'ny X-Ray Vision ao amin'ny Superman, ary izany indrindra no mahatonga ny fahadisoam-panantenana eo amin'ny fomba fisainana, tsara na rasty, amin'ny olona iray. Na izany aza, hitantsika izao fa ny fotoana no mitsara ny zavatra lalina indrindra.
Amin'ny lafiny hafa indray amin'ny tantara, ao amin'ny bialogy Mera Defensa de la Fe, nosoratan'i Eleuterio Fernadez Guzman, mandeha ny ady hevitra raha tokony horaisina ho tompon'andraikitra tamin'ny fametavetana ny fikambanana Legion du Christ, izay naorin'i Maciel tamin'ny taona 1941. Namaly fanehoan-kevitra iray ny mpanoratra, fanehoan-kevitra izay manavaka ny asa nataon'i Maciel ankoatry ny nataony tao amin'ny fikambanana:
Tsy Marcial Maciel no Legion du Christ. Tsy mety tsotra izao izany. Raha hatao hoe izay aza, mazava ho azy fa tsy misy olona voavonjy mihitsy izany amin'ny rafitra natsangan'olombelona.
na izany aza, hiharan'ny fanadihadihana ihany ny Legion satria misy ifandraisany amin'ny fandraharahana, fanabeazana, ary politika koa aza: miparitaka any amin'ny firenena 20 ny fikambanana ary misy mpikambana 70 000, toa ilay mpanao gazety Raymundo Palacio voasoratra ao amin'ny andalantsoratra Eje Central.
Ao amin'io andalantsoratra io ihany no milaza ny antsipirian'ny fanadihadihana nataon'ny fahitalavitra tamin'ny taona 1990 momba an'i Maciel ity mpanao gazety ity, milaza izy fa mpandraharaha ambony sy mpanao politika koa aza toy ny olona akiky ny filoha Ernesto Zedillo no nandrahona ny hanakatonana izay fahitalavitra mandefa io fanadihadihana io. fanampin'ny resaka, lahatsoratra iray tao amin'ny New York Times no nilaza fa misy ifandraisany ny Legion du Christ sy ny mpandraharaha ambony Meksikana, tahaka ny Telcel (mpanefoefo Carlos Slim efa tazana matetika niaraka tamin'i Maciel), Coparmex, Grupo Alfa, ankoatry ny fikambanana hafa nanampy tamin'ny fanarotsaronana ny zava-doza vitan'ity pretra ity.
Ivonne maneho hevitra ny andalatsoratra nosoratan'i Palacio miaraka amin'ny fahaizany manokana amin'ny maha mpanao gazety azy 10 taona lasa izay:
Recuerdo mis días de reportera en REFORMA, donde (…) tocar el caso Maciel era como clavarles un dardo en el corszón. (…) Era, por desgracia, un acto ideológico revestido de ceguera fe católica. (…) Diez años después de aquel agravio personal (…), me doy por bien servida al atestiguar que han perdido todas sus batallas de pretendido dominio ideológico.
Tadidiko ny fotoana naha mpanao gazety ahy tao amin'ny vondrona REFORMA, izay (…) nanindrona ny fo tokoa ny fotoana niresahana ny momba an'i Maciel (…) Mampalahelo fa foto-kevitra nahajamba ny finoana katolika izany (…) Folo taona aty aorian'ny fanenjehana ity olona ity (…), mahatsiaro ho afa-po aho raha mahatsapa fa resy tamin'ny adiny izany foto-kevitra nireharehany izany.